Samsung dia mamaly ny zava-nitranga farany an'ny Galaxy Note 7 tamin'ny fiaramanidina | Vaovao momba ny gadget
Samsung dia mamaly ny zava-nitranga farany an'ny Galaxy Note 7 tamin'ny fiaramanidina
Omaly fotsiny dia nahalala olana vaovao isika tamin'ny Galaxy Note 7 izay nanomboka nifoka tamin'ny sidina Southwest Airlines, izay mbola tsy niainga ary farany voatery nesorina. Azo heverina ho ara-dalàna izany, taorian'ny olana rehetra nanodidina ny sainam-pirenena Samsung vaovao, fa ny olana dia finday finday fanoloana izy io.
Midika izany fa ny tompon'ity Galaxy Note 7 ity dia efa nandefa ny tarika izay heverina ho kilemaina hisolo azy. Ity terminal vaovao ity dia toa tsy tokony hanana olana amin'ny bateria ary mazava ho azy fa nanana ny kisary fivarotana bateria izay napetrak'i Samsung amin'ny terminal rehetra izay heverina fa tsy misy olana amin'ny bateria.
Mazava ho azy, ny orinasa Koreana Tatsimo dia tsy niadana nanonona ny tenany ary namoaka fanambarana ofisialy izay azonao vakiana; "Mandra-pahatongantsika mamerina ilay fitaovana dia tsy afaka manamarina izahay fa misy ifandraisany amin'ny Galaxy Note 7 vaovao ity tranga ity ... Rehefa mandinika ilay fitaovana izahay dia manana fampahalalana bebe kokoa hizarana."
Ankehitriny dia tsy maintsy jerentsika raha voamarina fa singa fanolo an'ny Galaxy Note 7 araka ny voalazan'ny tompony. Raha voamarina ity farany ity, dia matahotra mafy aho fa ho avy ny fotoana ratsy ho an'ny Samsung, izay hahita ny olana tsy voavaha manodidina ny mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Galaxy Note.
Mihevitra ve ianao fa miatrika tranga mitokana isika na hiverina ny olan'ny Galaxy Note 7 miaraka amin'ny bateria?. Lazao anay ny hevitrao amin'ny toerana natokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Samsung dia mamaly ny zava-nitranga farany an'ny Galaxy Note 7 tamin'ny fiaramanidina
Tsy mino aho fa fanoloana izay heverina fa nanana an'io olana io.
Tsy mino aho fa nitranga tamin'ny mpisolo toerana izany ...
Jj dia hoy izy:
Nanana iray tsy soloina aho ary tsy nafanafana mihitsy ary naharitra iray andro sy sasany ny bateria ka heveriko fa tranga mitokana izy ireo.
Mamaly an'i Jj
Gilbert Salazar dia hoy izy:
Heveriko fa mitovy ihany fa singa taloha fa tsy singa vaovao. ary manantena aho fa satria mbola tsy naverin'izy ireo indray ny fanamarihako 7 ary maro ny olana mivoaka, izany dia tena kivy sy malahelo be aho
Valiny tamin'i Gilberto Salazar
Raha misy mahalala raha manana an'io olana io ilay maodely sansung galaxi s7 dia ampahafantaro ahy izy.
Valiny tamin'i Jhonny
Ny Mi Note 2 dia efa eo amin'ny sehatry ny famokarana hoy ny CEO an'ny Xiaomi
Chromecast Ultra Inona no vaovao ao amin'ity Chromecast ity?